အဟောင်းစားသော သူဋ္ဌေးကြီး	Posted on September 27, 2009	by mettayate ဗုဒ္ဓလက်ထက်က – ကျောင်းဒကာမကြီး ၀ိသာခါသည် (၇)နှစ် သမီးအရွယ်ကတည်းက သောတပန်တည်ခဲ့သည်။ သို့ပေမယ့် တိတ္တိဆရာတွေကိုကိုးကွယ်သော သူဌေးကြီး မိဂါရ၏သား ပုဏ္ဏ၀ဎုနနှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့ရသည်။ ၀ိသာခါသည် ယောက္ခမကြီး မိဂါရနှင့်သူ့သားတို့အား အမြင်မှန်ရစေရန် အမြဲတန်းစဉ်းစားနေခဲ့သည်။ တစ်နေ့ မိဂါရသူဌေးကြီးထမင်းစားနေစဉ် ၀ိသာခါကအနားမှာထိုင်၍ ယပ်ခတ်ပေးနေစဉ် ရဟန်းတော်တစ်ပါး မိဂါရ၏အိမ်ရှေ့တွင် ဆွမ်းရပ်လေ၏။ ဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်ထင်ရင် ရပ်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ မိဂါရကား မသိချင်ယောင် မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ကာ ထမင်းကိုသာ ဆက်စားနေသည်။ တကယ့်ဆွမ်းကို လောင်းလှူဖို့နေနေသာသာ ကန်တော့ဆွမ်းကိုပင် လောင်းလှူခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ကုသိုလ်ကြောင့် လူဖြစ်လာရသည် ဖြစ်၍ လူနှင့် ကုသိုလ်၊ ကုသိုလ်နှင့်လူသည် ခွဲ၍မရချေ။ ကုသိုလ်လမ်းပျောက်ကွယ်သွားသည်နှင့် လူသည် လူ့လမ်းကြောင်းမှ ဖယ်ခွာသွားရမည် ဖြစ်သည်။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← ကံ အကြောင်း